उतारचढावमय २०७५ : कुन महिनामा के भयो ?
सिन्डिकेटविरोधी वैशाख :
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले बैशाख १ गते कर्णालीबाट ‘कर्णाली पर्यटन वर्ष २०७५’को उद्घाटन गरेर सुरू भएको २०७५ सालको पहिलो महिना यातायात क्षेत्रमा रहेको सिन्डिकेट विरुद्ध सरकारले सुरु गरेको अभियानमय रह्यो । सरकारले गैह्रनाफामूलक संस्थाको रुपमा दर्ता भएका देशभरीका यातायात समितिहरू भंग गर्ने वैशाख ५ गतेको निर्णयले ठूलै तरंग ल्यायो । यसको विरोधमा यातायात व्यवसायीहरूले यातायात बन्द गर्‍यो । तर यो मुद्दामा सर्वसाधारण र सञ्चार जगतको अपार समर्थन पाएको सरकार आफ्नो निर्णयमा अडिग रह्यो । सरकारले यातायात व्यवसायीका केन्द्रीय नेताहरू नै पक्राउ गर्न थालेपछि अन्ततः वैशाख २३ गते व्यवसायीहरू सरकारसँग सहमति गर्न बाध्य भए । तर दीर्घकालीन रूपमा सरकारले यसलाई आफ्नो चासोको केन्द्रमा राख्न चाहेन/सकेन । फलस्वरूप केही समय चर्चा बटुलेर सरकारको यो अभियान शिथिल हुन पुग्यो । समानान्तरमा यातायात व्यवसायीहरूले पहिलेको भन्दा केही फरक स्वरूपमा आफ्नो सिन्डिकेट हालसम्म जारी राखेका छन् ।
एकतामय जेठ :
वाम गठबन्धनको घोषणा गर्दै निर्वाचनमा होमिएको तत्कालीन नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्रबीचको एकता जेठ ३ मा पुगेर मात्रै सम्भव हुन पुग्यो । संघ र प्रदेश निर्वाचनको पूर्वसन्ध्यामा २०७४ असोज १७ गते वाम गठबन्धनको घोषणा गर्दै गर्दा दुवै पार्टी अध्यक्षले वाम एकतादेखि समाजवादसम्मको उद्घोष गरेका थिए । चुनावी परिणाममा यसले राम्रै प्रभाव पारेको देखियो । तर पार्टी एकतामा पुग्न भने करिब ८ महिना लाग्यो । सुरूमा २०७५ बैशाख ९ गते गर्ने भनिएको पार्टी एकता एमाले नेता मदन भण्डारीको स्मृति दिवसको दिन जेठ ३ मा मात्रै सम्भव भयो । त्यसपश्चात् छिट्टै सिध्याउने भनिएको तल्लो तहको एकता भने वर्षभरी नै हुने सकेन । त्यस्तै, जेठमै ३३ केजी सुन प्रकरणमा भएको छानबिन र त्यस काण्डमा पक्राउ परेका आरोपीहरू चर्चामा छाइरहे ।
अनशनले तरङ्गित असार :
तुलनात्मक रूपले सहज अवस्थामा चलिरहेको प्रधानमन्त्री केपी ओली नेतृत्वको सरकारको असहजता २०७४ को असारबाट शुरू भयो । चिकित्सा शिक्षामा सुधारको माग राख्दै डा. गोविन्द केसीले आफ्नो १५ औं अनशनको घोषणापछि सरकार विस्तारै आलोचनाको केन्द्रतिर तानिन थाल्यो । कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा असार १६ बाट डा. केसीले सुरू गरेको अनशनले बीस दिन नाघेपछि सरकारले उनलाई जबर्जस्ती काठमाडौँ ल्यायो । त्यसक्रममा डा. केसी अनशन बसेको कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा प्रहरीले गोली समेत चलाए । प्रहरीले अस्पतालमा गोली चलाएपछि ओली सरकार चौतर्फी रूपमा आलोचनाको शिकार भयो । दुई तिहाईको सरकार विरुद्ध काठमाडौँका सडकमा जुलुस निस्किने क्रमको सुरुवात असारबाटै भयो ।
धाँजा फाटेको साउन :
मध्य बर्खामा किसानका खेतहरूमा रोपाइँ र खेतीकिसानी चलिरहँदा सरकारमा सत्तारुढ दल, सदनमा प्रतिपक्ष र सडकमा सर्वसाधारण नागरिकको मनोविज्ञानमा धाँजा फाट्न थाल्यो । सरकार गठन भएको पाँच महिना नबित्दै सरकारका कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री शेरबहादुर तामाङले साउन ८ गते राजीनामा घोषणा गरे । बंगलादेशमा अध्ययनरत छात्राहरूबारे आपत्तीजनक अभिव्यक्ति दिएपछि तामाङमाथि चौतर्फी दबाब सिर्जना भएको थियो । साउन १० गते कञ्चनपुरकी १३ वर्षीया किशोरी निर्मला पन्तको बलात्कार हत्याले सिंगो देशलाई हल्लायो । उनको बलात्कारी र हत्यारालाई पक्राउ गर्न देशैभरी प्रदर्शनहरू भए । तर सरकारले अहिलेसम्म अपराधी पत्ता लगाउन सकेको छैन । यो महिना देशको न्यायालय समेत राजनीतिको नराम्रो शिकार हुन पुग्यो । जन्ममिति र शैक्षिक योग्यताको प्रमाणपत्रको विवादमा तानिएका प्रधानन्यायाधीश गोपाल पराजुलीले पदावधि बाँकी रहँदै पदबाट राजीनामा दिए । त्यसपछि प्रधानन्यायाधीशमा सिफारिस भएका वरिष्ठतम् न्यायाधीश दीपकराज जोशीलाई संसदीय सुनुवाइ समितिले साउन १८ गते नियुक्तिका लागि अयोग्य भन्दै अस्वीकृत गर्‍यो । जोशीको स्थानमा दोस्रो वरियताका न्यायाधीश ओमप्रकाश मिश्र प्रधानन्यायाधीश बन्न आइपुगे । नेत्रविक्रम चन्द ‘विप्लव’ नेतृत्वको नेकपाका प्रवक्ता खड्गबहादुर विश्वकर्मा ‘प्रकाण्ड’को पक्राउ, रिहाई र पुनः पक्राउका सिलसिलाहरूले पनि यो महिना चर्चित रह्यो ।
भदौमा फेरि मोदी :
२०७५ को सुरुवातमै मुक्तिनाथ भ्रमणको लागि नेपाल आएका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी बिमस्टेक सम्मेलनको छेको पारेर भदौमा चौथो पटक नेपाल आइपुगे । चौथो पटक नेपाल भ्रमणमा आउँदा उनी काठमाडौँ नभई प्रदेश २ को अस्थायी राजधानी जनकपुरमा उत्रिए । जानकी मन्दिरको पूजा गर्न जनकपुर आएका उनलाई स्वागत गर्न प्रधानमन्त्री केपी ओली जनकपुर नै पुग्नुपर्‍यो । भदौ १४ र १५ गते काठमाडौँमा भएको बिमस्टेकको चौथो शिखर सम्मेलन भेटघाट र औपचारिकतामा सीमित भए पनि सम्मेलनकै क्रममा भारतीय प्रधानमन्त्री मोदीले बिमस्टेक राष्ट्रका सैनिकको संयुक्त अभ्यास हुन लागेको जानकारी दिएपछि यो विषय विवादित हुन पुग्यो । विवादका कारण अभ्यासमा सहभागी हुने तयारी रहेको नेपाली सेना त्यसमा सहभागि भएन । नेपाली सेनाका तीन अधिकृत पर्यवेक्षकका रूपमा मात्रै सहभागि भए । त्यस्तै भदौ १ गतेदेखि लागु भएको नयाँ मुलुकी देवानी सहिंताले पनि राम्रै चासो बटुल्यो । भदौ २४ गते प्रधान सेनापतिमा नेपाली सेनाका बलाधिकृत रथी पूर्णचन्द्र थापा नियुक्त भए ।
अरिङ्गालको गोलोमा असोज :
पार्टी र सरकारमाथि निरन्तर आक्रमण हुन थालेपछि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले आफ्नो नेता–कार्यकर्तालाई अरिङ्गाल झैँ बन्न निर्देशन दिए । प्रधानमन्त्री ओलीले विम्बको रूपमा प्रयोग गरेको अरिङ्गालले अन्ततः उनलाई नै चिल्न थाल्यो । सामाजिक सञ्जाल र सञ्चार माध्यममा अरिङ्गाल शब्दलाई लिएर प्रधानमन्त्रीमाथि व्यापक घोचपेच भयो । समग्रमा पुरै राजनीति अरिङ्गालमाथिको बहसमा उत्रियो । सरकारको विरोध गर्नेमाथि अरिङ्गाल झैँ जाइलाग्न दिएको प्रधानमन्त्रीको निर्देशनलाई अधिकांशले असहिष्णु मानसिकताको उपज ठाने । त्यस्तै, प्रतिनिधिसभाको निर्वाचनमा पराजित भएका नेकपाका नेता वामदेव गौतम पुनः चुनाव लड्ने चर्चाले पनि असोज महिना तरङ्गियो । यो चर्चाको सुरुवात भदौको पहिलो हप्तादेखि नै भएको थियो । डोल्पाका सांसद धनबहादुर बुढाले राजीनामा दिने र त्यहाँबाट गौतमले चुनाव लड्ने खबरसँगै छाल उठ्न थालेको वामदेवको चुनावी चाहनामा त्यहाँका मतदाताको मनोविज्ञान बाधक बनिदियो । तर असोजको मध्यतिर काठमाडौं–७ का सांसद रामवीर मानन्धर वामदेवका लागि राजीनामा दिन तयार भएपछि यसले पुनः चर्चा पायो । यो चर्चाले पार्टीभित्र अन्तरविरोधको स्थिती सिर्जना गर्‍यो । सामाजिक सञ्जालमा पनि वामदेवको चुनावी चाहनालक्षित प्रहारहरू भए । फलस्वरूप बामदेव ‘ब्याक’ भए ।
राष्ट्रपतिलाई ‘घाँडो’ कार्तिक :
राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीलाई अत्याधिक विवादमा तान्ने ‘घाँडो’ महिनाको रूपमा कार्तिक दर्ज भयो । दशैंमा सर्वसाधारण र सरकारी निकायका उच्चपदस्थ अधिकारीरूलाई टीका लगाइदिँदाको तस्वीर सार्वजनिक भएपछि राष्ट्रपति भण्डारी चर्को आलोचनाको शिकार भइन् । केही बहालवाला र पूर्व विशिष्ट अधिकारीहरूले कुर्सीमा बसेकी भण्डारीको हातबाट टीका लगाउँदा घुँडा टेकेको तस्वीरले विवाद निम्त्याएको थियो । तस्वीर सार्वजनिक भएपछि गणतन्त्र नेपालमा पनि राजतन्त्र कालमा जस्तै विभेदलाई निरन्तरता दिइएको, कम्युनिष्ट राजनीतिबाट सत्तामा आएकाहरूमा समेत सामन्तवादी संस्कार र शैली देखिएको भन्दै विरोध भएको थियो । त्यस्तै दोस्रो पटक राष्ट्रपति चयन भएपछि पहिलो विदेश भ्रमणको रूपमा भण्डारीले गरेको कतार यात्रा पनि विवादित भयो । कतारलाई त्यतिबेला आफ्नै छिमेकी मुलुकहरूसहित केही देशले लामो समयदेखि नाकाबन्दी लगाएको थियो । करिब सवा करोड रूपैयाँ खर्च भएको राष्ट्रपति भण्डारीको उक्त भ्रमणलाई कुटनीतिज्ञहरूले ‘अपरिपक्व’ संज्ञा दिएका थिए । राष्ट्रपति भण्डारी यसअघि पनि विवादमा नतानिएकी होइनन् । संघीय संसदलाई सम्बोधन गरेर बग्गी चढेर संसद भवन जानु, पूर्व राजाकै शैलीमा विभिन्न मठ, मन्दिर चाहर्नुजस्ता कुराहरूले उनको आलोचना भइरहेकै थियो । तर दशैंको टीका पश्चात् उनको आलोचनाको ग्राफ व्यापक बढ्न थाल्यो । त्यसपछि पनि १८ करोडको गाडी, सवारीमा जनतालाई सास्ती, लिफ्ट उद्घाटन, राष्ट्रपति निवासमै हेलिप्याड निर्माण गर्ने लगायतका विषयले उनलाई विवादमा तानिरह्यो ।
‘होली वाइन’मा डुब्यो मंसिर :
‘विश्व शान्तिका लागि’ भन्दै युनिभर्सल पिस फेडेरेशन नामक संस्थाद्वारा आयोजित एशिया प्यासिफिक समिटको चर्चा–परिचर्चाले मंसिर महिना सिध्यायो । समिटको आयोजक संस्था रहेको पिस फेडेरेशन एक धर्म प्रचारक संस्था रहेको र विवादित संस्थाको कार्यक्रममा सरकारको सहभागिता रहेको भन्दै आलोचकहरूले यसको व्यापक आलोचना गरे । आलोचना त्यतिबेला झन् चुलियो, जब कार्यक्रममको समापन समारोहमा सहभागि विवाहित जोडीलाई ‘होली वाइन’ पिलाइयो । युनिफिकेश चर्चका संस्थापक रहेका विवादित धर्मगुरू सन मुङ मुनको शुक्रकीटको अंश रहने होली वाइन पिउन सरकारका उच्चपदस्थ अधिकारीदेखि राजनीतिक दलका नेताहरू सहभागि भएको भन्दै त्यसको व्यापक आलोचना भयो । समिटका क्रममा सरकारले सवारी साधनमा लागु गरेको जोर–बिजोर प्रणालीको समेत व्यापक विरोध भएको थियो ।
पुसमा जुरेको सपथ :
टीकापुर काण्डको योजनाकारका रूपमा आरोपित रेशम चौधरी प्रतिनिधि सभाको निर्वाचनमा विजयी भएको एक वर्ष बितिसक्दा समेत सपथ लिनबाट बञ्चित थिए । वारेसनामा मार्फत् उम्मेदवारी दिएर कैलाली १ बाट चुनाव जितेका चौधरीलाई सपथ खुवाउन उनको दल राष्ट्रिय जनता पार्टीले पटक पटक आग्रह गर्दै आइरहेको थियो । निर्वाचित भएपश्चात् २०७४ फागुन १४ गते अदालतमा आत्मसमर्पण गरेका चौधरील सपथ लिन भने २०७५ को पुस १९ गतेसम्म कुर्नुपर्‍यो । टीकापुर घटनामा कडा धारणा राख्दै आएका केपी शर्मा ओलीको प्रधानमन्त्रीकालमै भएको चौधरीको सपथ सोही कारण विवादित पनि भयो । सपथलगत्तै उनलाई पुनः डिल्लीबजार कारागार लगिएको थियो । पछि उनलाई जिल्ला अदालत कैलालीले मुख्य दोषी ठहर गर्दै जन्मकैदको फैसलासमेत गर्‍यो । पुसमै वैकल्पिक राजनीतिको नेतृत्व गर्दै आइरहेको विवेकशील साझा पार्टीमा फुट आयो । विवेकशील नेपाली र साझा पार्टीको एकता भएको डेढ वर्षको अवधिमा विवेकशील साझामा विभिन्न मतभेदहरू थिए । उक्त मतभेदहरूको विस्फोटन पुस २७ गते हुन पुग्यो । त्यसपछि यो पार्टी उज्जवल थापा र रवीन्द्र मिश्रको आ–आफ्नै शिविरमा विभक्त भयो ।
भेनेजुएलामा 'चिप्लिएकाे' माघ :
आन्तरिक राजनीतिका उतारचढावहरूमै अल्झिरहेको नेपाली राजनीति २०७५ माघमा एकाएक अन्तर्राष्ट्रिय राजनीतिको भूमरीमा आफै हेलिन पुग्यो । भेनेजुलएलामाथि अमेरिकी हस्तक्षेपको विरोध गर्दै सत्तारुढ दल नेकपाका एक अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले माघ ११ गते कडा भाषामा विज्ञप्ति जारी गरेपछि त्यसले कुटनीतिक हलचल नै निम्त्यायो । विदेश भ्रमणमा रहेका अर्का अध्यक्ष तथा प्रधानमन्त्री केपी ओलीको अनुपस्थितीकै बीच जारी गरिएको उक्त विज्ञप्तिमा सरकारको आधिकारिक धारणा माग गर्दै अमेरिकी दूतावासले पनि तीव्र प्रतिक्रिया जनायो । स्पष्टै रूपमा अमेरिकाले आफु रुष्ट भएको जनाउ दियो । नेकपाको सचिवालय बैठकमा समेत प्रवेश गरेको यो विषयले अध्यक्ष प्रचण्डको विज्ञप्तिलाई नरम भाषामा परिमार्जित गर्दै पार्टीको धारणा सार्वजनिक त गर्‍यो, तर लगत्तै प्रधानमन्त्री ओलीले प्रचण्डले जारी गरेको विज्ञप्तिलाई ‘चिप्लिएको’ संज्ञा दिएपछि राजनीति थप तरंगित हुन पुग्यो । त्यस्तै प्रदेश सभामा निर्वाचित विवादित दीपक मनाङेले सभासदको रूपमा माघ १४ गते सपथ लिए ।
फागुनमा विप्लवलाई प्रतिबन्ध, सीकेलाई स्वागत :
बम विस्फोट र चन्दा आतंकको कारण देखाउँदै सरकारले नेत्रविक्रम चन्द ‘विप्लव’को गतिविधिमाथि फागुन ८ गते प्रतिबन्ध घोषणा गर्‍यो । प्रतिबन्धको घोषणासँगै विप्लव सूमह र सरकारबीच उच्च राजनीतिक टकराव सुरू भयो । विप्लवका उच्च तहका नेता तथा कार्यकर्ताहरूलाई प्रहरीले व्यापक रूपमा पक्राउ गर्न थाल्यो । विप्लवले त्यसको विरोध गर्दै राजनीतिक वक्तव्यहरू जारी गरिरहे । सरकार र विप्लवबीच राजनीतिक आरोप र प्रत्यारोप चल्न थाल्यो । सरकारको तर्फबाट प्रधानमन्त्री स्वयं आक्रामक भाषणबाजीमा उत्रिए । विप्लवविरुद्ध आक्रामक हुँदै सरकारले विखण्डनको राजनीति गर्दै आएका सीके राउतसँग भने गला मिलाउन पुगे । विखण्डनको मुद्दा त्यागेको भन्दै सरकारले सीके राउतसँग फागुन २४ गते ११ बुँदे सहमति समेत गर्‍यो । तर सरकार र सीके राउतबीच सहमतिको व्याख्या गर्ने क्रममा समस्या देखिएपछि उक्त सहमति नै शंकाको घेरा पर्न गयो ।
चैतमा उठेन लगानी :
सरकारले समृद्धिको उद्घोष गर्दै गर्दा शुरु भएको २०७५ ले वर्षको अन्त्यसम्म आइपुग्दा समृद्धिको झिनो संकेतसम्म दिलाउन सकेन । यहि विषयलाई सरकारको १ वर्षे कार्यकालको मुल्याकंनमा आलोचकहरूले तारो बनाएपछि २०७५ समृद्धिको ‘आधार वर्ष’ भएको भन्दै सरकारले शाब्दिक बचाउ गर्‍यो । आधार वर्षलाई पुठ प्रदान गर्न चैत १५ र १६ गते लगानी सम्मेलनको आयोजना भयो । तर लगानी सम्मेलन अपेक्षित हुन नसकेका टिप्पणीहरू भए । सम्मेलनमा संयुक्त राज्य अमेरिका लगायतका केही देशहरूको सहभागिता नदेखिदाँ र लगानीका लागि अपेक्षित रकम संकलन हुन नसक्दा लगानी सम्मेलनले लगानी उठाउन नसकेको चर्चा भयो ।